Mitandrina ny fo
"Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony hotandremana ; fa avy ao aminy no ihavian’ny aina." Ohabolana 4 :23
Zava-dehibe tokoa ny fitandremana fatratra ny fo amin' ny fitomboana ara-pahasalamana ao amin'ny fahasoavana. Ny toetry ny fo hatramin'ny nahaterahana dia toby itoeran'ny eritreritra tsy masina sy ny filàna feno fahotana. Saingy rehefa entina eo anatrehan'i Kristy ny fo, dia tsy maintsy voadion'ny Fanahy Masina amin'ny faharatsiana rehetra. Tsy ho azo atao mihitsy izany raha tsy eo ny faneken'ny tena manokana.
Rehefa voadio ny fanahy, dia adidin'ny Kristianina ny mitandrina izany tsy ho voaloto indray. Maro no toa mihevitra fa tsy mitaky ny fialana amin'ny fahotana isan' andro ny fivavahan'i Kristy, dia ny fialana amin'ny fahazarana nangeja ny fanahy hatrizay. Miala amin'ny zavatra izay melohin'ny feon'ny fieritreretana izy, kanefa tsy hainy ny maneho an'i Kristy eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy entiny ao an-tokantranony ny toetra manahaka an'i Kristy. Tsy mamadika ny lelany impito izy vao miteny. Mazàna teny maharary sy tsy voahevitra no aloaky ny vavany - teny izay manaitra ny filàna ratsy indrindra ao amin'ny fon'olombelona. Ny olona toy izany dia mila ny fitoeran'i Kristy mandrakariva ao amin'ny fanahiny. Amin'ny alalan'ny herin'i [Kristy] ihany no ahafahan'ireo mitandrina ny fiteny sy ny fihetsika ataony (...)
Maro no zara raha mahafoy fotoana hanaovana fandinihan-tena sy fandinihana Soratra Masina ary fivavahana, toy ny hoe ho verivery foana ny fotoana laniana amin'izany. Iriko ianareo rehetra mba hahita ireny zavatra ireny ao amin'ny fahazavana izay omen'Andriamanitra anareo, mba hanaovanareo ny fanjakan'Andriamanitra ho loha laharana. Ny fo misaina hatrany ny any an-danitra no hampahatanjaka ny fahasoavanareo rehetra, sy hametraka ny fiainana ho eo ambany fiandraiketanareo rehetra ( ... ) Tahaka ny fampiasam-batana izay mampitombo ny fahazotoan-komana, sady manome hery sy fahasalamana ho an'ny vatana, dia toy izany koa ny fahazarana feno fanoloran-tena izay mampitombo ny fahasoavana sy ny herim-panahy.
Aoka hiakatra hipaka any amin' Andriamanitra ny vavaka, manao hoe: « Amorony fo madio aho Andriamanitra ô» - Sal. 51:10; fa ny fanahy madio sy voadio no manana an'i Kristy mitoetra ao anatiny, amin'ny fotoana mahafeno indrindra ny fo no ipoiran'ny plana eo amin'ny fiainana. Aza avela handalo ao amponareo ny fitiavan-tena, fa hidio izy tsy hidiran’izany; fa ilain'ny fo kosa ny misokatra mba hidiran'ny fitaomana tsara sy mangina avy amin'ny Fanahin'Andriarnanitra. Mamoaka hanitra manim-pofona eny rehetra eny ny fivavahana iainana, izany no tsiron'ny fiainana ao amin’ny fiainana